Nirona Tamin’i Google ny Didin’ny Fitsarana Ambony ao Brezila, Manoloana ny ‘Zo Hohadinoina’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Novambra 2016 10:12 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Magyar, Français, 繁體中文, 简体中文, English
Dikasary Youtube avy amin'i JP Low. mety ampiasaina.
Niara-nanapakevitra tsy nisy nitsivalana ny [tao amin'ny] Lapan'ny Fitsarana Ambony Breziliana (STJ) fa tsy mety ampiharina amin'ny Google na ny milim-pitadiavana hafa ny “zo hohadinoina”.
Araka ny nolazain'ny mpampaka-teny ara-pitsarana Nancy Andrighi, nametraka ny didy fa ny fanerena ny mili-pikarohana handray fanapahan-kevitra amin'ny fandraisana fangatahana ka hanaisotra rohy sasantsasany avy amin'ny fanaovana karoka dia hanome andraikitra be loatra amin'ny mili-pikarohana, ka hahatonga azy ireo ho mpanao sivana nomerika.
Tsy afa-mitsabaka amin'ny mili-pitadiavana izahay fa raha tsy izany dia tsy ho hitantsika ny toe-javamisy amin'ny torohay. Tsy afa-mametraka ny andraikitr'io manome tolotra io izahay. Mbola hitoetra ihany [ny votoaty], fa raha mandrohy ny toerana misy ny sary io mpanome tolotra io, dia io mpanome tolotra hafa io no miantsoroka ny andraikitra.
Na dia ny vaovao momba ny raharaha aza dia tsy naseho vahoaka satria notontosaina tambanin'ny tsiambaratelom-pitsarana ny fotoam-pitsarana.
Mifanohitra amin'ny fanapahan-kevitry ny Fitsarana Eoropeana tamin'ny taona 2014 amin'ny filazana fa iantsorohan'ny mili-pikarohana ny andraikitra fanesorana tondro mety ahitana azy amin'ny fikarohana atao ny mili-pikarohana raha afa-mitaky “zo hohadinoina” ny olona iray na zo hanesorana ny torohay “antitra na tsy ilaina” momba azy ireo izao fanapahan-kevitra izao. Nafana dia nafana tokoa ny adihevitra na tao amin'ny vondrona eoropeana na tany an-kafa, indrindra moa raha nitady ny hanesorana ny torohay momba azy avy amin'ny mili-pitadiavana ireo olona fanta-daza, mba hanatsarana ny endrik'izy ireo ampahibemaso.
Raha arovan'ny lalana amin'ny zava-mitranga toy ny fandikan-dalam-pifamoivoizana na trosa izay mety ho hitam-bahoaka ny lalàna, dia mahatonga fanontaniana ihany koa ny maha-zava-dehibe ny fahafahana mijery ny torohay amin'ny asan'ireo mpiasan'ny governemanta sy ireo olo-manandaza hafa.
Tamin'ny herintaona ny Fitsarana Tampony Breziliana no efa nanome rariny ny Google ihany koa tamin'ny fitoriana napetrak'ilay mpanolotra malaza amin'ny fahitalavitra Maria das Graças Meneghel, fantatra amin'ny hoe “Xuxa”. Tany amin'ny fiandohan'ny taompolo 1980 tany ho any, talohan'ny nisandratany tamin'ny lazany, dia nanao sarimihetsika nahitana azy nanao firaisana ara-nofo tamin'ny zazalahy 12 taona ity mpanolotra fandaharana tamin'ny fahitalavitra ity. Notorian'i Xuxa ny Google hitaky amin'ny mili-pikarohana hanafina ny voka-karoka rehetra mampifandray azy amin'io filma io.
Araka ny fikarohana tsy ofisialy nataon'ny gazety breziliana iray, taminn'ny saika ⅓ -n'ny trangam-panosoram-potaka an-tserasera tao Brezila, dia nirona tany amin'ny zo hanaisotra avy amin'ny torohay an'aterineto mampifandray ilay olona resahina tratran'ny fanosora-potaka na zavamisy manafintohina, na tamin'ny vono olona izay efa nanafahana madiodio ilay olona ny fitsarana.
Tsy ho ela ny Fitsarana Tampon'i Brezila — izay rafitra ara-pitsarana ambony kokoa noho ny STJ — dia hihaino ireo raharaha isan-karazany momba ny zo hohadinoina mahatafiditra ny TV Globo, tambajotram-pahitalavitra lehibe indrindra ao Brezila. Ny raharaha dia nentin'ny havan'i Aida Cury, zazavavy 18 taona izay nisy nanolana sy namono tamin'ny taona 1958, raharaha iray izay tsy voavaha mihitsy hatramin'izay. Tamin'ny taona 2008 dia navoakan'ny TV Globo ny tantaran'ity raharaha iray ity. Nitory ny tambajotra ny havany, tamin'ny fandresen-dahatra fa “namoaka indray ny fotoana mangidy teo amin'ny fianakaviana” ny fitantarana ary niantso ny petrakevitry ny “zo hohadinoina” ny mpisolovavan-dry zareo.
Samihafa ny adihevitra amin'ireo raharaha ireo. “Amin'ny didy navoakan'ny STF , rindrambainga no ifotoran'ny addihevitra: manan-jò handrara ny olona hiresaka zava-nitranga sasantsasany ve ny olona iray? Ny amin'ny didy navoakan'ny STJ [fitsarana tamony], eo amin'ny fombam-pitsarana kokoa no ifotoran'ny adihevitra: raha afa-mandefa fitakiana mivantana amin'ny mili-pikarohana hanao hamafana ny olona iray,” hoy i Mariana Cunha e Melo, mpisolovava ao amin'ny birao misolo tena ny Google, tamin'ny Global Voices.
Ny fanapahan-kevitra avoakan'ny roa tonta eo, ny an'ny Lapan'ny Fitsarana Ambony na ny an'ny Fitsarana Tampony efa miandry amin'ity raharaha manokana ity, dia samy hametraka fiandoham-pamoahan-didy iankinan'ny fotoam-pitsarana hafa amin'ny raharaha mitovy aminy.